जानीराखौ! मृत्‍यु पछी हाम्रो फेसबूक प्रोफाइल के हुन्छ - inaruwaonline.com
जानीराखौ! मृत्‍यु पछी हाम्रो फेसबूक प्रोफाइल के हुन्छ
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर १९, २०७२ समय: १५:३३:४०
फेसबूक नचलाऊने हिजो आज सायदै होलान। तर हामी मध्य धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ कि मृत्‍यु पछी हाम्रो फेसबूक प्रोफाइल के हुन्छ। यदी तपाईंको मनमा मृत्‍यु पछी फेसबूक प्रोफाइल के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ भने अब यस्को समाधान पनि फेसबूक कम्पनीले ल्याएको छ। एक फेसबूक प्रयोग कर्ताको मृत्‍यु पछी उस्को फेसबूक कसैले दुरुपयोग गरेको थियो। जस्का कारण मृतकको परिवारलाई धेरै तनाव झेल्नु परेको थियो।
उनीहरुले फेसबूक कम्पनीलाई अाग्रह गरेपछी यस्को समाधान भएको थियो। हालै फेसबूकले ल्याएको सुविधा अनुसार कसैको मृत्यु पछि उसको परिवारका सदस्य वा नजिकको साथीले फेसबुकलाई निवेदन दिन सक्ने छन् र भन्नु पर्ने छ ‘मृतकको प्रोफाइलाई एक स्मारक बनाइदेउ ।’
तर यस्का लागि निवेदकले मृतकको मृत्‍यु प्रमाण पत्र या यस्तै आधिकारिक प्रमाण फेसबूक कम्पनीमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछी मृतकको फेसबूक प्रोफाइलमा भएका तस्विर देखिने छन तर निवेदकले मृतकको फेसबूक लगइन गर्न भने पाउने छैन। फेसबूकमा प्रोफाइल बनाउने बेलामा या फेसबूक प्रोफाइलमा आफ्नो उत्तराधिकारी छनौट गर्ने सुविधा पनि फेसबूकले दिएको छ। उत्तराधिकारी प्राप्त ब्यक्तीले मृतकको फेसबूक न त लगइन गर्न सक्छ न त पोस्ट सेयर गर्न सक्छ। मृतककोको उत्तराधिकारीले केबल प्राप्त रिक्वेस्ट स्विकार गर्ने या अस्विकार गर्नमात्र सक्दछ।
फेसबूक प्रयोग कर्ताको लागि फेसबूकले अर्को विकल्प पनि दिएको छ। जुन विकल्प अनुसार फेसबूक प्रयोगकर्ताले फेसबूक कम्पनीमा आफ्नो मृत्‍यु भएपछी स्वत: फेसबूक प्रोफाइल बन्द हुने गरी पहिले नै निवेदन दिन सक्दछ। विभिन्न अनलाइन बाट ।